metropcs inowedzera alcatel imwe yekubata inotyisa uye alcatel imwe yekubata inoshanduka kune yayo lineup
Kuru Nhau & Ongororo MetroPCS inowedzera Alcatel Imwe Kubata Inotyisa uye Alcatel Imwe Kubata Ichinjika kune yayo lineup
Pre-akabhadhara anotakura MetroPCS yazivisa nhasi kuti iri kuwedzera akati wandei maAlcatel Android akashatisa nharembozha kumutsara wayo. Ivo vaviri, iyo Alcatel One Kubata Inoshanduka uye iyo Alcatel One Kubata Inehasha, yakatotanga kuvhurirwa T-Mobile vatengi mwedzi wapfuura . T-Mobile, sekuziva kwenyu vazhinji, muridzi weMetroPCS. Pakati pezviviri, Iyo Imwe Inobata Hasha ndiyo inonakidza kifaa.
Iyo Alcatel One Touch Inotyisa inotengeswa pamadhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe echikwata chese nekaboodle. Iyo yakagadzirirwa 4.5 inchi skrini ine resolution ye540 x 960 (qHD) ine quad-core 1.2GHz MediaTek processor mubhodhi. 1GB ye RAM iri mukati uye ye4GB yekuchengetera chizvarwa, 2.4GB inowanikwa kune mushandisi. Nekutenda, pane 32GB inokwanisa microSD slot pane chishandiso. Iyo kamera kumashure ndeye 5MP nepo .3MP snapper inokomberedza kumberi kwefoni, iyo inofambiswa neiyo 1800mAh bhatiri. Android 4.2.2 yakaiswa kunze kwebhokisi.
MetroPCS iri kuburitsa iyo Alcatel One Touch Evolve seyakanakisa ruoko kumushandisi mutsva we smartphone uyo, ahem, achichinja kubva kune anoshandisa foni mushandisi uye akatemerwa zvinoenderana ne $ 59. Sporting iyo 4 inch 480 x 800 resolution pani, iyi modhi inopa pony simba pasi pehood muchimiro cheimwechete musimboti 1GHz MediaTek CPU. 512MB ye RAM inouya nechishandiso, pamwe ne4GB yekuchengetedza chizvarwa. Iyo microSD slot inowanikwa kune vashandisi uye iye chete shooter parunhare ndeye 5MP imwe kumashure. Android 4.1 yakaiswa pane iyo unit kunze kwebhokisi.
Mavhidhiyo ese ari maviri achashanda neMetroPCS 'pre-yakabhadharwa isina muganho chirongwa chinotanga pa $ 40 pamwedzi.
Mhando mbiri Alcatel mhando dzave kuwanikwa kuMetroPCS
uchiri kusunungura mu bash script
5G iPhone 12 mutsara unotambura nechakakomba screen skrini; Apple inoronga software yekuvandudza
Google Home smart maspika anogona ikozvino kuve paired nevamwe vechitatu-bato maBluetooth masipika
Zvakanakisisa Kutenga uye maAmazon ane akanakisa Samsung Galaxy Watch Anoshanda ari kutengeswa pamutengo usingamise
Leak inoratidza nhamba yemodheru yeAT & T & apos; s LG G4?